Communiqué de presse - Book News Madagascar
Publié mai 7, 2017 par Tiasoa
CHALLENGE COSFA NATATION DEFI FROID 2017
Ny hetsika « Challenge Cosfa natation Défi Froid 2017 » dia hetsika fanaon’ny Club Omni-sport des Forces Armées (Cosfa) isan-taona. Andiany fahavalo ity notontosaina ny sabotsy 6 mey 2017 ity.
Nisokatra ho an’ny olon-drehetra mahay milomano ny fifaninanana: miaramila, orinasa, “handisport”, mpankafy natation na “fans natation”, ary ireo fikambanana na “club licenciés”. Mpandray anjara 192 no nandray anjara tamin’ny fifaninanana, avy amin’Analamanga sy ny manodidina, avy tamin’ireo “clubs licenciés” fito. 63 kosa no “non-licenciés” nanadray anjara: mpamonjy voina, handisport, sns.
Nanomboka tamin’ny 7 ora maraina ny fifaninanana ary nifarana amin’ny 5 ora hariva. Ny atoandro tamin’ny 12 ora sy sasany dia nisy ny fanehoana “sauvetage en eau” nataon’ny mpamonjy voina sy ny fanentanana isan-karazany toy ny dihy sy ny maro hafa.
Tao amin’ny dobo filomanosana na “piscine” Betongolo izay mirefy 33, 33 metatra no hotontosaina ny lalao. Sokajy fahatelo amin’ireo fotodrafitr’asan’ny FINA (Fédération internationale de natation). Sokajy voalohany ny “bassin” mirefy 50 metatra, sokajy faharoa ny “bassin” 25 metatra. Fotodrafitr’asa napetraky ny Frantsay tamin’ny Fanjanahantany ny dobo filomanosana ao Betongolo.
Ny “fans natation” sy ireo mpifaninana “handisports” dia ireo olona te hisoratra anarana sy hanao ny fifaninanana fotsiny, dia mahazo “certificat” na mari-pahatsiarovana rehefa vita ny fifaninanana.
Ireo “licenciés” sy ireo mpifaninanana an’orinasa ary ny “sekoly” sy ny miaramila kosa dia hahazo « coupe » na amboara ireo mpandresy amin’izany.
Nisy ny fampianarana lomano faobe omen’ny maîtres nageurs eto Betongolo sy ny mpanazatra ny Cosfa tamin’ny volana septambra ho an’ireo vao nianatra nilomano nefa te hifaninanana.
Nibata ny amboara tamin’ny fifaninanana lomano miaramila ny avy amin’ny mpamonjy voina avy eto Antananarivo. Ny miaramila avy tao amin’ny FIGN avy ao amin’ny Gendarmerie Nationale no nifanandrina tamin’izy ireo tamin’izany tamin’ny “relais 6xlongueur”.
Nibata ny amboara ny “clubs licenciés”-an’ny Association sportive Saint-Michel (ASSM) Amparibe. Faharoa kosa ny Cosfa ary fahatelo ny club Managing.
Nozaraina mari-pankasitrahana kosa ireo mpankafy lomano na “fans natation” nandray anjara rehetra.
Mpisolo tena any amin’ny fiadiana tompon-daka iraisam-pirenena
Mpandray anjara 6 taona ka hatramin’ny 20 taona no mivondrona ao amin’ny Cosfa Natation. Ankizy 2 ao amin’ny Cosfa Natation no handeha hifaninana any Budapest, Hongrie amin’ny volana jolay, hanatrika ny tompondaka eran-tany amin’ny taranja lomano amin’ity taona ity, izay ao anatin’ny ekipa nasionaly ihany koa. Raharvel Hanta Valisoa Sarah, 20 taona, sy Andrianirina Lala Nomena, 19 taona, no ho solotenantsika amin’izany.
Anisan’ny mampiavaka ny club Cosfa ihany koa ny fandraisana anjaran’ireo solon-tena avy amin’ny fifaninanana amin’ny Jeux des Iles.
Anisan’ny angatahan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana amin’ny fametrahana dobo filomanosana mafana na “piscine chauffée” mba hialana amin’ny fotoana ririnina izay tsy ahafahan’ny ankizy milomano. “Anisan’ny lemin’ireo mpilomanontsika ny tsy fahafahana milomano mandavan-taona”, hoy Raharvel Vonison, filohan’ny Cosfa.
Raha mila fanazavana manokana dia ity ny laharana ahazoana ny tompon’andraikitra:
Maître-Nageur Tojo Ramandimbiarisoa: 032 41 606 17 (responsable technique)
Book News Agency: 034 74 157 30 – 032 63 383 31